Abasebenzi nabafundi base-UKZN babambe umbhikisho wokuthula ihora elilodwa kuwo wonke amakhempasi ekulweni nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane.
Abaphathi abakhulu base-UKZN, abasebenzi nabafundi basanda kuphuma ngobuningi babo ukuveza ukweseka ukulwa nesihlava esidlangile sokuhlukunyezwa kwabantu ngokobulili (i-GBV), ukunukubezwa kwabantu besifazane nezingane emibhikishweni yokuthula yehora kuwo wonke amakhempasi nomlindelo wobusuku bonke ekhempasini i-Westville.
Abasebenzi nabafundi abangaphezu kwama-500 bayo yonke imikhakha neminyango bahlangene bamasha kuzo zonke izindawo ezivulekile kuwo wonke amakhempasi begqoke izingubo ezimnyama, bephethe izingqwembe.
Ngenkathi kubhikishwa ekhempasini i-Westville, abasebenzi besilisa nabesifazane nabafundi bakhulume ngezinto ezibahluphayo ezithinta ukuphepha, bagxeka udlame olubhekiswe ebantwini besifazane nezingane. Ngemva kombhikisho, leli qulu limashile lahambisa uhla lwezikhalo Kwezokuvikela Ubungcuphe eNyuvesi.
Umfundi owenza iziqu ze-Onazi Kwezokwakhiwa koMhlaba uMnu Sashan Manikam uthe amadoda kudingeka aqonde iqhaza lawo ekusabalaleni i-GBV nokuthi kuwumsebenzi wawo wonke umuntu ukukuqeda.
UNks Anele Khumalo, owenza unyaka wesithathu weziqu zeSayensi yezokweLapha, uthe wesaba nokuphumela ngaphandle ngenxa yokusabela impilo yakhe, eyabantu besifazane, ikakhulukazi eyezingane. Uthe ufisa kube nokuthula ezweni kanti mhlawumbe kudingeka kube nomcimbi wokuhlambulula ngoba ukholwa wukuthi kunethunzi lobumnyama ngezinto ezenzeka ezweni kudala.
Emyalezweni wakhe obhekiswe kubantu baseNyuvesi, iSekelashansela noMphathi wase-UKZN uSolwazi Nana Poku unxuse wonke umuntu obhekana nokuhlukunyezwa noma obona yisiphi isigameko sokuhlukumeza ngokocansi, ukuhlukumeza, ukucwasa ngokobulili noma ububhoklolo ukuthi abike ngokushesha.
‘SiyiNyuvesi sidinga ukuba munye, silwe nesihlava sokuhlukumeza esidlangile kuwo wonke amaphiko eNyuvesi yethu. I-GBV nanoma iyiphi inhlobo yokuhlumeza akwemukeleki ikakhulu kule Nyuvesi nasemphakathini jikelele.
UPoku uphakamise lokhu okulandelayo ngokushesha ukulwa nesihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane:
• Ukusungula indlela yokudidiyela amacala e-GBV nosizo lokwelulekwa nokwesekwa nokuxhumana namaphoyisa ngokushesha.
• Ukusungula indlela eyodwa yokuxhumana nezokulekelelwa kwabafundi ekhempasini ngayinye. Bazotholakala ngezikhathi zonke ngaphambi nangemuva kosizo lokwelulekwa kwabahlukunyeziwe, baphinde belekelele ngalo lonke usizo oludingekayo.
• Kumanje kunemizamo yokuqinisa usizo olutholakala emtholampilo yasemakhempasini kusetshenziswa imikhakha yethu yezokweLapha, ezeMpilo neyezeNhlalakahle.
• Sesinezindlela zokugudluza nokumisa izigilamkhuba, siphinde sibe nendawo ephephile kulabo abagiliwe yokuthi basizwe ngabeluleki.
• Sizoqasha iJaji elivuthiwe kodwa eselithathe umhlalaphansi ukuthi liphothule wonke amacala ngokushesha. Abaphathi abakhulu bazoqhubeka nokubheka izibalo zanyanga zonke ukuqinisekisa ukuthi ayaphothulwa wonke amacala ngokushesha.
• Ukuqinisekisa ukuthi izindaba eziphathelene nokuqondisa ubugwegwe kubafundi ziphothulwa ngendlela efanele nangokushesha, sizobeka umaHluleli ngokugcwele.
• Ngokubambisana nozakwethu bezemfundo sizibophezele ekusunguleni izinhlelo ezifundisa neziqwashisa ngezinto ezithinta i-GBV. Loku kuzokwenzeka ngasekuqaleni konyaka ozayo.
• Abaphathi beNyuvusi bahlela ukusebenzisa i-app ephathekayo yezokuphepha ezokwenza abafundi nabasebenzi bakwazi ukuthinta eZokuvikela Ubungcuphe uma kunesimo esiphuthumayo ngokucindezela inkinobho. Sihlele ukuthi loku kuzoqala ukwenzeka ngoMfumfu wangowezi-2019.
Amagama: uSithembile Shabangu